Home News RW Kheyre: Farmaajo dalka laguma aamini karo! Maxaa ka soo baxay shirkii...
RW Kheyre: Farmaajo dalka laguma aamini karo! Maxaa ka soo baxay shirkii sadax geesoodka (xog/sir iyo cadeymo)
Ka dib markii laga soo noqday duugtii hooyo Xaajiro Cali Adan oo ah hooyada dhashay Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Maxamed Mursal oo ku geeriyootay gobolka Bay, ayaa waxaa kulan qaasa oo ay albaabada u xiran yihiin wada qaatay RW Kheyre, Gudoomiye Mursal iyo Sharif Xassan kulankaan ayaa lagu qabtay xafiiska gaarka ah ee Sharif Xassan ee ku yaala madaxtooyada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed dhankeeda danbe. Kulanka ayaa waxa uu socday in ka badan sadax saacadood. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay arimo farabadan oo ay ku jirto taabagalinta heshiisyo horay loo wada galay laakiin aan wali la meel marin. MOL ayaa heshay xogta shirka iyo codad goos goos ah oo laga duubay kulanka sadax geesoodka. Anaga oo tixgalinayna amaanka dadka nala wadaagay xogta ayaan dib u dhignay sii deynta codadk goos gooska oo aan si fiican loo maqlaynin. Laakiin waxaan halkaan idinkuugu soo gudbinaynaa xulashada xogta shirka sadax geesoodka ahaa ee ka dhacay magaalada Baydhabo..
RW Kheyre ayaa sheegay in xiriirka isaga iyo MW Farmaajo ka dhaxeeyo uu maalinba maalinta ka danbeeysa sii xumaanayo, waxa uu afka ku dhuftay in MW Farmaajo aan dalka lagu aamini karin, isaga oo ku dheeraaday karti xumida Farmaajo iyo sida ay qabyaalada ugu fogaatay. RW Kheyre ayaa u sheegay saaxibadiis in dhamaan magacaabista la sameeyo intooda badan uu Farmaajo magacaabo isagana oo uu ku raaco. Kheyre ayaa yiri “ …. war aniga ayuu eed igu galiyay beesha Hawiye iyo beelaha Digil iyo Mirrifle, dadku waxa ay u haystaan in aan go’aanka aniga leeyahay laakiin taa runa ma ah” . Tusaale waxaa uu soo qaatay magaacabista taliyaha Ciidanka Badda iyo kan Hay’ada Nabadsugida Qaranka (NISA) oo si toosa u taabanaya danaha beelaha Digil iyo Mirrifle.
Kheyre ayaa yiri “ .. waa runtaa Sharif Xassan, aniga ayaa ninkaan labo sano la soo shaqeeynaayay, malaha awood hogaamineed iyo dareen uu dalka ku hogaamin karo” Kheyre ayaa raaciyay “ waa nin xataa dharkiisa ka shakinayo, oo waxa kastoo oo aad u keento shaki unbuu ka qaadayaa, marmarka qaar waan ku qasbaa in uu aqabalo talo aan is leeyahay waxbaa lagu badbaadin karaa….. walaahi ayaan ku dhaartay Farmaajo ma aha shaqsi mas’uuliyad umadeed qaadi karo, hadii aan isaga tagi lahaa xataa waxaan ka baqayaa in uu ninkaas dalka qar kala dhaco” Kheyre ayaa tusaale u soo qaatay safaradda uu MW Farmaajo u safro iyo in aan isaga laga talagalin. Waxa uu sheegay in markii balaayo timaado oo kali ah loo yeero isaga lagana codsado in uu xaliyo dhibka yimid. Kheyre oo caro ka muuqato ayaa sheegay in wax badan uu ka xishoonayno ay jiraan oo uusan doonaynin in uu la wadaago saaxibadiisa. Kheyre oo is celin waayay ayaa ku daray “ …waxaa isaga ka sii daran gabadha aan ehelka nahay ee uu isaga qabo Zeynab, iyada ayaa qarka ka sii tuurayso Farmaajo”.
Shirkaan sadax geesoodka ah ayaa sidoo kale looga hadlay in sadaxda hogaamiye ay sameeystaan xisbi ay ku midaysan yihiin, Sharif Xassan ayaa sheegay in uu dhawaan uu ku dhawaaqi doono xisbi cusub kaas oo ay intooda badan xubno ka noqonayaa xildhibaanada dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed. Dhanka kale Xassan Kheyre ayaa dhankiisa sheegay in uu diyaariyay xisbi uu doonayo in uu isaga hogaamiyo, Kheyre waxa uu yiri “ …. waxaan diyaariyay sharuudihii iyo xubnihii iyo lacgtii aan ku bixin lahayn xisbiga laakin dib ayaan u dhigay….. sababta aan dib ugu dhignayna waxa ay ahayd markii hore aniga iyo Fahad iyo Farmaajo ayaa ku heshiinay dhisida Xisbiga, aniga iyo Fahad waxaa naloo xilsaaray in aan abaabulno xildhibaanadii xubnaha ka noqon lahaa halka MW Farmaajo uu isaga gadaal naga taagnaanayo” Kheyre ayaa raaciyay “ laakiin hadda qorshahan hakad ayaan galiyay, waxaana aan go’aansaday in aan mid aan aniga u madaxbanaahay aan sameeysto” Kheyre oo hadalkiisa sii wato ayaa ku daray “ aniga iyo Farmaajo wax iskuma darsan karno, musharxna iima noqon karo, inta aan ka bartay ayaa iiga falan”. Kheyre ayaa sheegay inuu isaga sanadka 2021 uu yahay musharax wixii lacag uu u baahnan lahaana uu diyaarsaday, waxaana uu u sheegay Sharif Xassan in labada Xisbi marka lawada dhiso ay mustaqbalka isku biiri doonan.
Kulanka inta uu socday Gudoomiye Mursal hadalalkiisu waa uu yaraa, waxa uga mahad-celiyay RW Kheyre lacagtii uu siiyay iyo arimihii guriga (ma garayno waxa uu ula jeeday arimaha guriga) waxaanse ku qiyaasnay in RW Kheyre uu dhul u iibiyay Maxamed Mursal. Gud. Mursal ayaa u sheegay RW Kheyre in culayka ugu weyn uga imaanayo xildhibaanada beelaha Digil iyo Mirrifle . Kheyre ayaa waxa uu la soo boday “ labatameeyo xildhibaan aniga ayaa hadda lacag siiyo, waxa kaliya oo aan aad uga baqayo waa qolooyinka ku xiran Famaajo, gaar ahaan beesha Digal oo hadii aan wax kastaa u qabtay wali aan kalsooni igu qabin, sida aan qiyaasayo waxaa arintaan gadaal ka riixayo Xuseen Caluulkuus”
Inta uu kulanka socday waxa uu Sharif Xassan codsaday in lacagtii horay looga balan qaaday lagu soo wareejiyo, gaar ahaan hadii ay daacad ka tahay Farmaajo iyo Kheyre in ay isaga taageeraan. Sharif Xassan ayaa balan qaaday hadii lacagtaas la siiyo in uu ka hortagaayo go’aanada lidka ku ah dowlada ee ka soo bixi doona shirka magaalada Kismaanyo. Kheyre ayaa sheegay in uusan balan qaad buux sameeyn karin xilgaan hadda ah laakiin uu dib ugu soo noqon doono. Sharif Xassan ayaa u sheegay in uusan balan qaad la gali karin Farmaajo ilaa lacagta la balan qaaday meel la saaro, isla markaana uu si cad u joojiyo MW Farmaajo taageerada uu doonayo in uu siiyo Mukhtaar Roobow.
Kulanka inta uu socday waxaa si wada jir ah la iskula xantay Madaxweynhii hore Xassan Shiikh iyo waxa uu ka damacsan yahay iyo sidii looga hortagi lahaa. Gaar ahaan waxaa wal-wal ka muujiyay RW Kheyre joogitaanka Xassan Shiikh ee uu joogo Muqadishu.
Previous articleKolonyo Ay La Socdeen Ciidamada Amisom Oo Qarax Lagula Eegtay Deegaano Hoostaga Gobolka Sh/hoose
Next articleWaraaq Furan oo ku Socota Xildhibaan walba oo ku jira Barlamanka Federaalka.
Wasaaradda Amnigga oo kasoo horjeesatay Amarkii Madaxweyne Farmaajo Ee Ahaa In...